ငါ့ကိုမ Kid နဲ့…မင်းကြိုက်တဲ့သူကြိုက်! | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Kid ငါ့ကို ... သင်ကအခမဲ့ကဲ့သို့ပင်မ!
Kid ငါ့ကို ... သင်ကအခမဲ့ကဲ့သို့ပင်မ!
ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ယနေ့ဒီမှာမှောင်မိုက်ကိုခံစားနေတဲ့ငါသိ၏။ တံခါးကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုအဖြေလည်းမရှိသောကွောငျ့အကြှနျုပျနှလုံး၌ငါကျနော်တို့ရှုံးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါသိ၏။ ဒီစနစ်န်းကျင်တစ်လမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သည်းခံခြင်းနှင့်ကတိကဝတ်တစ်ခုစမ်းသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းကြီးမြတ်စိတ်ကူးတစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်အနိုင်ရနိုင်တယ်။ " - ဒွန် Draper, "အရူးယောက်ျား"2007-2015, AMC
လေ့လာသုံးသပ်သူများကဆိုသညျကားအဘယျသို့ငြားလည်း, တီဗီကြည့် Netflix, အမေဇုံချုပ်, (ထိပ်ကျော်) YouTube ကိုအနီရောင်နှင့် OTT တီဗီဖြင့်အစားထိုးခံရရန်ပုံရော့ခ်နဲ့တူကျဆင်းနေခြင်းမရှိပါ။
သူမသည်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကအကြောင်းကိုတီဗီချွတ်ကျိန်ဆိုသာ (ရံဖန်ရံခါ binging) ကိုချောင်းမြောင်း Netflix နှင့် Amazon ချုပ်နှင့်သူမ၏အခမဲ့လူမှုမီဒီယာ - စသည်တို့ကို Facebook မှာ, Youtube, Snapchat,
နှစ်ခုပထမဦးဆုံးနှင့် FAANG (Facebook က, အမေဇုံ Apple, Netflix, Google က) နှင့် BAT (ဘိုင်ဒူ, အလီဘာဘာ, Tencent) လူအစုအဝေး၏ကျန်အကြောင်းအရာဝယ်ဖို့; ကြော်ငြာများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးတန်ဖိုးကိုသွားပြီတခါ, ထိုရုပ်ရှင် / ရှိုးတစ်နေရာ ... တစ်ဦး Vault သို့မသွားကြပါဘူး။
ဤရွေ့ကား streaming ကုမ္ပဏီများမှပရိသတ်တွေတည်ဆောက်ဖို့ "ပူယခု" အကြောင်းအရာဖမ်းပြီးမှအလေးအနက်ပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြတယ်။
သူတို့ကအဝေးချိန်းတီဗီ (မိတ်ဆွေတစ်ဦးအားဖြင့်ငါ့ကိုမိတ်ဆက်မယ့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ) မှကြည့်ရှုနို့စို့နေကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 22.2 သန်းကိုအမေရိကန်လူကြီးများ, cable ကိုပေါ်ကြိုးဖြတ် ဂြိုဟ်တုယခင်တစ်နှစ်ကနေ, ဒါမှမဟုတ် Telco တီဗီဝန်ဆောင်မှု-up, 33 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။
ဒါကအဆင်ပြေမယ့်, အဲဒါကိုသည်အဘယ်အရာဖြစ်တော်မူ၏ ဒါပေမယ့် FAANG နှင့် BAT အဖွဲ့အစည်းကတီဗီကြော်ငြာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။
nScreenMedia မကြာသေးမီက Netflix နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြော်ငြာ-supported တီဗီကြည့်၏တီဗီကြော်ငြာဝင်ငွေစားပွဲပေါ်မှာချွတ်တစ်နှစ်လျှင် 3-6B ကြော်ငြာဒေါ်လာကို ယူ. ခန့်မှန်းပါတယ်။
Colin Dixon ကအမေရိကန် Netflix နဲ့ subscriber များအားအလိုအရ 35 30-စက္ကကြော်ငြာတစ်ရက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်နေ့လျှင်နီးပါး 2B ကြော်ငြာအမြင်များကိုမြင်လျှင်ကနေ "ဆုံးရှုံး" နေကြပါတယ်။
လွတ်သွားသောကြော်ငြာအမြင်များစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ်ဦးလျှင်တစ်နှစ်ကို $ 139, ဒါမှမဟုတ် $ 7.6B ဖြစ်ခန့်မှန်းနေကြသည်။
သူတို့ကသစ်ကိုလှိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ဈေးကွက်ထဲမှာ repurposed ခံရပါတယ် - Google, Facebook, Youtube, Snapchat က, Twitter, LinkedIn သင်သည်သင်၏အနီးကပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိတ်ဆွေတထောင်တရာအနည်းငယ်နှင့်အတူပစ္စည်းပစ္စယဝေမျှဖို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရှိရာ။
social media ဒါစေတနာရှိရှိအသံ; သူတို့သင်ဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့ပေးဖို့မတတ်နိုင်နိုင်အောင်ပေမယ့်တကယ့်ကြော်ငြာပလက်ဖောင်းတစ်ကျဲပါးဖုံးအုပ်လျက်ရှိကွဲပြားခြားနားထားထက်ပိုမိုဘာမျှပါပဲ။
Google ကယင်း၏အရောင်း / အမြတ်အစွန်း၏ကျန်ကနေ YouTube ကိုင်ငွေထွက်ကိုချိုးဖျက်မထားဘူးသော်လည်း, RW Baird မှာအလုပ်အမှုဆောင်မကြာသေးမီကဗီဒီယို site ကိုဖြစ်ကောင်းတစ်ဦး $ 15B စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင်းခန့်မှန်းပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏တည်ငြိမ်စီးပေးသည်ကြောင်း "အခမဲ့" ဖျော်ဖြေရေးအဘို့ဆိုးရွားဘူး။
သေချာတာပေါ့အိုး - YouTube နဲ့ Snapchat ကောင်းသောအကြောင်းအရာနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Kim Kardashian က featuring အဆိုပါ FitTea ကြော်ငြာသကဲ့သို့-ဒါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြော်ငြာများနှင့်လူစည်ကားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုလည်စည်း-ins ပို. ပို. ကြောင့်သြဇာ '' အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုမသက်မသာအခြေအနေများသို့ကုမ္ပဏီများကဦးဆောင်ပြီသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာဖျော်ဖြေရေး၏တစ်ဦးကအများကြီးအချို့သောထုတ်ကုန်ကိုးကွယ်, နောက်လိုက် sorta / 'kinda' 'အမှန်တကယ်ကိုအသုံးယုံကြည်သူ, ကျော်ကြား-အမည်ခံတခါတရံမေးခွန်းထုတ်စရာရှေးရှေးပြုနေသည်။
သို့သော်တူကွန်ရက်များ အား NBC, CBS နှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအခြားသူများအားထိုလုလင်သည်လူအစုအဝေးပုံအသစ်က streaming များန်ဆောင်မှုများအဘို့ထိုသူတို့စွန့်ခွာနေစဉ်သူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှပရိသတ်ကိုရုံ, အဟောင်းများနှင့်အထက်ရတဲ့စောင့်ရှောက်ကြောင်းတောင်းပန်ငြီးငွေ့ဆည်းပူးကြသည်။
ဘော့ Greenblatt, အား NBC ဥက္ကဌနဲ့သူ့အဖွဲ့ Nielsen ratings (TV ကိုကြည့်ရှု၏တိုင်းတာခြင်း) ကပရိသတ်ကိုပြီးခဲ့သည့်ရာသီအဘို့ဆင်း 10 ရာခိုင်နှုန်းကြောင်းအစီရင်ခံနေစဉ်ကသာပုံပြင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြောသည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
CNBC ကနေဒေတာ, အား NBC.com, အား NBC app ကို VOD နှင့် Hulu ရှေ့ပြေးဖြစ်စဉ်များကနေဝင်ငွေ 47 ရာခိုင်နှုန်းကိုအမှန်တကယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင်များမှတဆင့်သို့ရောက်လာသောပြသခဲ့သည်။
တနည်းအားဖြင့်ထုတ်လွှင့်သူတို့၏ (အိုမင်းဆိုသော်ငြား) ရိုးရာချိန်းတီဗီကြည့်ရှုပေါ်သို့ကိုင်တတ်သောအကြည့်အလေ့အထများနာရီ, ပြက္ခဒိန်, တည်နေရာ, screen ပေါ်မှာမူတည်ဘူးအငယ် OTT လူအစုအဝေးကိုဖမ်းယူနိုင် - တီဗီ, ကွန်ပျူတာ, တက်ဘလက်, စမတ်ဖုန်း။
အနီးကပ်အချက်အလက်များ၏အားလုံးဆန်းစစ်ပြီးနောက်, အား NBC ကြည့်ရှုသူတို့အား "စွန့်ပစ်" ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားအပေါ်ပြပွဲစောင့်ကြည့်မရဖူးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားအတွက်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အဘို့, အား NBC စုစုပေါင်းပရိသတ်ကိုပေးပို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက် - ကြည့်ရှု streaming, ထုတ်လွှင့်, cable ကိုရောက်ရှိဖို့။
အထူးသဖြင့် Snapchat တိုတောင်းသောဗီဒီယိုများနှင့်ပျေါလှငျ၏ထို့အပြင်အတူ - အွန်လိုင်းကြည့်ရှု 35 ရာခိုင်နှုန်းက - သို့သော်ကွန်ယက်ပိုမိုရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ပရိသတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပါကတစ်ဖွဲ့လုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်မော်ဒယ်ရဲ့မ
ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား - ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်မဟုတ်ဘဲချိန်း TV ပေါ်မှာမှီခိုထက်အကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်သူတွေကိုအားဖြင့်ကြည့်ရှုမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးအောင်မြင်။
အဆိုပါ IOC (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီ) ထိုအစီရင်ခံ:
သူတို့ဟာဆိုချီဂိမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, PyeongChang ထံမှ 14 ရာခိုင်နှုန်းပို programming ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြ
အဆိုပါဂိမ်းများကိုကြည့်နေစဉ်ကြည့်ရှုရာခိုင်နှုန်း 90 အပြင်သို့မဟုတ်အစားအခြားစက်ကိရိယာကိုအသုံးပြုနေ
အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဒစ်ဂျစ်တယ်, အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချိန်းတီဗီ - သောကြောင့်တီဗီပရိသတ်ကိုကြည့်၏နည်းလမ်းသစ်၏, စက်မှုလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာနှစ်ဆ TV ပေါ်မှာထုတ်လွှင့်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှာတွေ့နေကြပါတယ်။
မိုဘိုင်းနည်းပညာ၏နေရာအနှံ့သဘောသဘာဝနဲ့ content ဘယ်နေရာမှာမဆိုကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒနောက်ဆုံးတော့စားသုံးသူနည်းပညာပြောင်းလဲမှုအတွက်မောင်းနှင်အားကိုမှန်ကန်စေသည်။
သူတို့ကရိုးရိုး၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ် 24 /7မှာအကြောင်းအရာချင်; နှင့်ကမ္ဘာ၏ Netflix ယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်အရာကိုရှိနေသော်လည်း, သူတို့ကအခမဲ့ချင်တယ်။
ဆီဥကိုကြောင်စင်မြင့် left ခဲ့ပြီးပံ့ပိုးပေးလျော့နည်းနှင့်အတူပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်။
Cisco ကဗီဒီယိုက 80 အားဖြင့်အင်တာနက်အသွားအလာ 2019 ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုဖို့မျှော်လင့်; နှင့် conventual သည်ပညာကို - အထူးသဖြင့်သက်သေအဖြစ် Netflix ဟာကြီးထွားကိုးကား - ဤမျှလောက်များစွာသောကြော်ငြာ blockers သုံးပြီးစတင်ပါပြီအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, စားသုံးသူတီဗီကြော်ငြာတွေမကြိုက်ဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကွဲပြား Opinions - စနစ်တကျတင်ပြ, စားသုံးသူအများအားဖြင့်ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့ content များအတွက် "ပေးဆောင်ခြင်း" ပြဿနာတစ်ခုမရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အသစ်တခုထုတ်လုပ်မှု / ဖြန့်ဖြူးချဉ်းကပ်မှုရဲ့စျေးကွက်နေဆဲသင်ယူဖို့အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိသည်။
သို့သော် Hub ကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအရသိရသည်သူတို့ကြော်ငြာတွေကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေသောလမ်းကိုကြိုက်ကြဘူး။
ပတေရုသ Fondulas, Hub ကျောင်းအုပ်ကြီး, မကြာသေးမီကစားသုံးသူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များမှာပစ်မှတ်ထားနေကြသည်ကြော်ငြာများကြိုဆိုပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ကြော်ငြာများအတိတ်ဝယ်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီးကြသောအခါစိတ်ဝင်စားစရာ, သူတို့က privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမရှိကြပါဘူး။ "
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာနှင့်ကြေးပေးသွင်း streaming များနယ်ပယ်တွင် Amazon ရဲ့လျင်မြန်စွာမြင့်တက်အတွက် Google နှင့် Facebook တွင်များ၏ကြီးစိုးနေသော်လည်းသူတို့ content တွေကိုပံ့ပိုးပေး, ကြော်ငြာရှင်များနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအသစ် "အခွင့်အလမ်း" ကိုဖွင့်သာယုတ္တိပါပဲ။
HBO, Showtime တူသောထိပ်တန်းကွန်ယက်စာရင်းသွင်းထားမှုများ, CBS All Access သို့မဟုတ်မှာကြော်ငြာ-supported လိုင်းများ - ထိုအခါဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း, အမေဇုံစားသုံးသူရွေးချယ်စရာပေးခြင်း, သူတို့ပြီးသားဥရောပနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ပြုကြသကဲ့သို့အမေရိကအတွက်ကြော်ငြာ-supported streaming များ channel များကိုကမ်းလှမ်းစတင်မည် တစ်ဦးအခကြေးငွေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော (ဝေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) သင်အဖြတ် cable ကို service provider က, ကိုရိတ်သို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကြော်ငြာ-supported အစီအစဉ်ကို Amazon ကမီဒီယာပံ့ပိုးပေး, content တွေကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်စျေးကွက် streaming များအတွက်ပင်ပိုကြီးသဘောတူညီချက်စေနိုင်ပါတယ်။
linear လျှော - boomers တိကျတဲ့ကြည့်အချိန်ဇယားမှတွယ်ကပ်ပုံပေါ်နေချိန်တွင်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းတီဗီလျင်မြန်စွာနှစ်တစ်ထောင်အားဖြင့် disfavor သို့ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
ငါ့ကို? ငါကြော်ငြာကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် "ပေးဆပ်" ရန်ပိုနှစ်သက်နှင့်ကြော်ငြာထုမဟုတ်ဘဲငါ့အအကျိုးစီးပွားမှာညွှန်ကြားခဲ့လျှင်ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်စောင့်ကြည့်မယ်။
ဆက်ဆက် Google က (YouTube ကို), Facebook နှင့် Snapchat ကြောက်မက်ဖွယ်ကြော်ငြာ-supported ကဗီဒီယိုလိုင်းများဖြစ်လာရန်အလားအလာရှိသည် ဖြစ်. , ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူမှုရေးပထမဦးဆုံးမီဒီယာ / ကြော်ငြာပလက်ဖောင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး, သတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းလိုင်းများကိုဒုတိယဖြစ်ကြသည်။
လူတိုင်းလူတိုင်းသို့မဟုတ်ဘာမှ posted ရနိုင် / ၎င်းတို့၏ဆိုဒ်များတွင်ထုတ်လွှင့်နှင့်သင်ချက်ချင်းမသင့်လျော်သင့်ကလေးများအတွက်ကအကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ်သင်) တစ်ခုဖျော်ဖြေမှုထိုင်-com ကနေသွားနိုင်ပါတယ်။
ထိုအခါကုမ္ပဏီ၏ကြော်ငြာကြိုတင်လယ်သို့မဟုတ် post ကိုလိပ်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်, သောအမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ပုံရိပ်ကိုအဘယျသို့လုပျသလဲ
အမေဇုံအညီအမျှဒေတာကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာပစ္စည်းပစ္စယဝယ်ဖို့သူကလူမျိုး၏အကြီးမားဆုံးသော databases ကိုတစ်ဦးရှိကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
ကျွန်မအမေဇုံရဲ့ခိုင်ခံ့သောဥယြာဉျကိုသူတို့ဝေမျှအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားခဲ့ပါဘူးသူတစ်ဦး CEO ဖြစ်သူသို့မဟုတ် CMO နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါဘူး, သူတို့ပေါ်လာနှင့်ထုတ်ကုန်ရောင်းသောကြော်ငြာများမှဝင်ငွေရရှိသောကြောင့်, သို့သော်သူတို့မကယ်မလွှတ်ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်။
နှင့်ကြော်ငြာရှင်များ - - ဒါဟာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်င်အကြောင်းအရာကလူနောက်တဖန်ပြန်ကြွလာချင်များကိုပေးစွမ်းထက်ကလေးတွေမြင်ရမတိုင်မီဝေးကိုနှိပ်ပါ။
အမေဇုံဥရောပက Sky အပြင်, တူးမြောင်းများနှင့်အခြား OTT န်ဆောင်မှုစားသုံးသူ SVOD နှင့် AVOD ရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
PCCW အဆိုအရတရုတ်လျှင်မြန်စွာပစိဖိတ်ဝှမ်း AVOD ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနေသည်နှင့် 4.9 အတွက် $ 2010B အသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယအသီးသီး 14.6M နှင့် 9.96M ကြည့်ရှုနှင့်အတူအင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကနောက်တော်သို့လိုက် 8.1M ကြည့်ရှု, ရောက်ရှိဖို့ဒုတိယနေရာဖြစ်လိမ့်မည်။
AVOD ကြည့်ရှုခေါင်းဆောင်များတာတာ, Vodafone, PT ပထမဦးစွာမီဒီယာ, NTT DoCoMo, အလီဘာဘာ, Tencent နှင့်ဘိုင်ဒူပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကြီးမားတဲ့ပြဿနာကဒီမှာဘယ်သူမျှမစားသုံးသူသစ္စာရှိမှုဖြစ်ပြီး, သူတို့တစ်တွေတိကျတဲ့ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကရိုးရှင်းစွာမိမိတို့၏အခမဲ့မီဒီယာချင်; သူတို့ရိုးရှင်းသော, အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါပလက်ဖောင်းချင်တယ်။
အဆိုပါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံသင်ယူခြင်း - ကြော်ငြာ-supported အကြောင်းအရာပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း OTT န်ဆောင်မှုတစ်ခုလျှင်မြန်စွာကြည်ညိုကြီးထွားလာပရိသတ်ကိုရှာတွေ့ကြသည်ပေမယ့်လူတိုင်းအဟောင်းကြော်ငြာအထုပ်များမှာ "ထိရောက်သောထက်လျော့နည်း။ " စားသုံးသူတွေနည်းပါးလာနှင့်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာတွေကိုမျှော်လင့်။
ဒီတော့ AVOD ပံ့ပိုးပေးကြော်ငြာညာဘက်သတင်းစကားနှင့်အတူလက်ျာအချိန်တွင်ကြည့်ရှုရောက်ရှိဖို့စားသုံးသူအချက်အလက်များ၏ပိုပြီးအသိဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာအကြောင်းအရာနံနှင့်အတိမ်အနက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးပေးသို့ back မှရပါလိမ့်မယ်။
ဒွန် Draper ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးသည်အတိုင်း, "နည်းပညာတစ်ဦးပြောင်မြှူဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အများပြည်သူ flash ကိုကျော်လွန်တဲ့အဆင့်တွင်စေ့စပ်နိုင်ချိန်တွင်ရှားပါးအခါသမယလည်းမရှိ - ။ သူတို့ကထုတ်ကုန်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့နှောင်ကြိုးရှိပါက "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အပံ့ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-02-28
ယခင်: အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts - 2018 NAB ပြရန်, Pre-Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @FMCTraining
နောက်တစ်ခု: အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဧရိယာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Sennheiser ရက်ချိန်း Arif PK